လက်ချောင်းအပေါ် burrs ဖယ်ရှားပစ်ရဘယ်လိုနေသလဲ? | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
လက်ချောင်းအပေါ် burrs ဖယ်ရှားပစ်ရဘယ်လိုနေသလဲ?
။ သေးငယ်တဲ့ပန်းကန်ထဲမှာ, မိမိလက်၌အသံလွင်ရေနံနှင့်အောက်ပိုင်းအပူ။ ရေနံကဆင်းအအေးအထိကိုင်ထားပါ။ ရေနံ, စစ်ထုတ်ဖို့အတွက်ဝါဂွမ်းလက်အိတ်ပေါ်တွင်တင်နှင့်နာရီစုံတွဲတစ်တွဲအဖြစ်လမ်းလျှောက်ခွင့်ပြုရန်။
ဗီတာမင်တစ်ဦးကလက်သည်းပန်းကန်ပတ်လည်ရှိအရေပြားထဲသို့ပွတ်နိုင်ပါသည်။ ဗီတာမင် A နှင့်အတူသို့မဟုတ်အာဟာရလက်မုန့်
အလှတရားစျေးဆိုင်များတွင် cuticles များအတွက်အထူးရေနံရောင်း။ လက်သည်းပန်းကန်နှင့် cuticle အတွက်တစ်ဦးချင်းစီညနပေိုငျးပွတ်သပ်ပါကအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေနှင့်ပျော့ပြောင်းပြီးဖြစ်လာအားဖြင့် burrs ၏ဖြစ်ပျက်မှုတားဆီးလိမ့်မယ် !! ! ကောင်းသောကံ)
အဆက်မပြတ်ပြုလုပ်ခန်းခြောက်ခြင်းနှင့်အက်ကွဲကြောင်း, ထို cuticle ဂရုစိုက် cuticles ကိုဖယ်ရှား, သန့်ရှင်းခြင်းနှင့် ptiregy moisturize
ဖြတ် burrs မီ, (ရေ 0,5 1 ဌ Tsp ထဲတွင်ပျော်ဝင်။ Spoon ဆော်ဒါနှင့် 1 အနုပညာ။ ခြောက်သွေ့သောဆံပင်များအတွက် Spoon ခေါင်းလျှော်ရည်) ဆော်ဒါနှင့်ခေါင်းလျှော်ရည်တွေနဲ့နွေးရေထဲမှာလက်၌ကိုင်။ ထို့နောက်တစ်ဦးတစ်သျှူးနှင့်သင်၏လက်ချောင်း DAB တိုတောင်းကျန်ရစ်အရေပြားဖြတ်ညှပ်ပြီးသန့်ရှင်းသောရေနှင့်အတူသင်၏လက်သုတ်ခြင်း။
Если заусенцы воспалились и под кожей началось нагноение, подержите пальцы в горячей содовой ванночке с йодом (2 чайн. ложки соды и3капли йода растворите в2стаканах горячей воды) , а затем приложите к пораженному месту спиртовую примочку. Через 1015 минут смажьте ранку маслом зверобоя, календулы или настоем березовых почек (2 чайн. ложки на 1 стакан кипятка, настаивайте2часа) . Чтобы предотвратить образование заусенцев, увлажняйте кутикулы каждый день. Пусть это войдет в привычку? втирайте лосьон или крем для рук в кожу возле ногтей, пока она не смягчится. Если нет крема под рукой, наверняка у любой хозяйки дома окажется ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီ, которое прекрасно питает и увлажняет кожу. Заусенцы вроде бы безобидны, но, если в них попадет инфекция, это может привести к серьезному воспалению кутикул и других тканей вокруг ногтей. И еще возьмите за правило ежедневно втирать на ночь любой жирный питательный крем или добавлять в крем по уходу за руками облепиховое масло (1/2 чайн. ложки на 1 ст. ложку крема).
не ходите временно в салон делать маникюр, заусеницы — результат того, что Вам плохо сделали маникюр
လက်သည်းပတ်ပတ်လည်ပါးလွှာသောအရေပြားများကဝိုင်းရံနေတဲ့ဒါခေါ် periungual အိပ်ရာရှိပါတယ်။ နည်းနည်းလေးဒဏ်ရာမှာအချုပ်ခန်း, ဤမျက်ရည် burrs တခါတရံအလွန်နာကျင်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, အရေးအကြီးဆုံးကတော့, အရေပြားမဆိုချိုးဖောက်မှုရောဂါပိုးများအတွက်ဝင်ပေါက်တံခါးဝဖြစ်ပါတယ်။ မကြာခဏပြုလုပ်ဆူးလက်သည်းရိုးတံ (paronychia) ၏ရောင်ရမ်းခြင်းသို့မဟုတ်တစ်ခုလုံးကိုလက်ချောင်း (felon) ၏အကြောင်းရင်းဖြစ်လာသည်။
burrs ၏ဖြစ်ပျက်မှုကာကွယ်တားဆီးဖို့, ကစနစ်တကျသင်၏လက်ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ရန်လိုအပ်ပေသည်။ သားသမီးတို့, spermaceti, lanolin: ခြောက်သွေ့တဲ့အသားအရေသို့မဟုတ်သူကိုမကြာခဏမိမိတို့လက်ကိုဆေးကြောဖို့ရှိသည်ရှိသူများသည်ကြောင့် superfatted ဆပ်ပြာကိုသုံးပါ သာ. ကောင်း၏။ သင်၏လက်ကိုသုတ်ရန်သေချာစေပါခြောက်သွေ့တဲ့ဖြစ်သင့်! ပူနွေးသောရေနှင့်အတူအခြားအဝတ်လျှော်မဆိုအဆီမုန့် (ဖဲ, Lanolin, မွေ့လျော်) ၏လက်ဖြင့်စိုစွတ်သောအသားအရေသို့ပွတ်သပ်ဖို့အသုံးဝင်သည်အပြီးညနေပိုင်းတွင်, ဝက်ဆီအတွင်းမှငန်းအဆီအရည်ကျို။
လက်သည်းအထူးဖြီးနှင့်အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်တစ်ပါတ်ဖြတ်ဆေးကြောဖို့အကြံပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီးလုပ်နေသည့်အခါအရေပြား periungual အိပ်ရာများသောအားဖြင့်ဖယ်ရှားသည်။ သင်ကအသားအရေနောက်ပြီး spatula ရုပ်သိမ်းပြီးနောက်, အိမ်မှာကအများနှင့်အသေးစားကတ်ကြေးဖြတ်နိုင်ပါ။
မည်သည့်ကိစ္စများတွင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည် Burrs အံသွားဆွတ်သို့မဟုတ် skusyvat လို့မရပါဘူး။ သူတို့ကဂရုတစိုက်ကတ်ကြေးသို့မဟုတ်လက်သည်းညှပ်သုံးပြီးဖြတ်, ပြီးတော့ပွန်းပဲ့တောက်ပအစိမ်းရောင်သို့မဟုတ်အခြားပိုးသတ်ဆေးဖြေရှင်းချက်လူး။ နက်ရှိုင်းသောဒုက္ခဆင်းရဲကိုအတူအလွန်ကောင်းသော dermatolovaya နံ့သာဆီဖြစ်ပါတယ်။
Posted in, နောက်ပြီး, ခြေသည်းအ
65 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,209 စက္ကန့်ကျော် Generate ။